अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यति ठुलो निर्णय लिदै गर्दै छन् यस्तो घोषणा ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /International/अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यति ठुलो निर्णय लिदै गर्दै छन् यस्तो घोषणा !
एजेन्सी । विश्वका शक्तिशाली दुई मुलुक चीन र अमेरिकाबीचमा पनि अहिले द्धन्द्ध छ । कोरोना भाइरसको महामारी पछि यो द्धन्द्ध थप बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न आक्षेप लगाउने गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसलाई चाइना भाइरस भनेर गरेको टिप्पणीको निकै आलोचना भएको थियो । ब्यापारका विषयलाई दुई देशबीच जारी तनाव कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावसंगै बढेदै गएको हो ।
‘कोरोना भाइरस महामारी’ चीनका कारण विश्वव्यापी बनेको तथा हङकङबारे चीनद्वारा ल्याइएको कानूनबारे अमेरिकाले चीनको आलोचना गर्दै आएको छ । चीनले कोरोना समबन्धी तथ्याकं लुकाएको भन्दै ट्रम्पले आलोचना गरेका छन् । साथै कोरोनाको रोकथामका लागि अमेरिकाले अपनाएको शैली चीनले अबलम्बन गरेको र त्यसका लागि चीनले ह्याकरको प्रयोग गरेको पनि दावी अमेरिकाले गर्दै आएको छ । चीनसंग बढिरकेको यस्तो तनावका कारण अमेरिकाले फेरी अर्को कदम चालेको छ । अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा अध्ययनका लागि पुगेका चिनका नागरिकलाई निष्काशन गर्न लागेका अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
न्यूयोर्क टाइम्सले सो दावी सहित समाचार तयार पारेको छ । उनले चीनका विद्यार्थीको भिषा रोक्ने र भएकाको पनि रद्ध गर्ने नीतिका बारेमा फेरी बिचार गरिरहेका छन् । चीनसंगको पछिल्लो समय बढेको द्धन्द्धका कारण उनले यस्तो नीति अवलम्बन गर्न थालेको बताइएको छ । उनको निसाना जो पिपुल्स लिबरेशन आर्मीको मान्यता प्राप्त केही विश्वविद्यालयको साथमा करार भएका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अर्थात चीनसँग करार भएका अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने तयारी ट्रम्पले गरेका हुन् । ट्रम्पको यो कदमको अमेरिकामै विरोध भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले यो सरकारको गलत कदम भएको प्रतिकृया दिएका छन् । अधिकारीहरूले यसले सम्भावित थप शैक्षिक प्रतिबन्धहरूलाई लाग्न सक्ने र चिनियाँ सरकारले अमेरिकीहरूमाथि आफ्नै भिसा वा शैक्षिक प्रतिबन्ध लगाएर बदला लिन सक्ने चेतावनी उनीहरुले ट्रम्पलाई दिएका छन् ।